अभिमत: 'आहा ! दसैं आयो'
'आहा ! दसैं आयो'
बागमती छेऊको सुकुम्बासी बस्तीमा स्कुलेकेटाकेटी घटस्थापना सुरु भएकै दिनदेखी लिङे पिङ मच्चाइरहेका छन् । काठमाडौं र ललितपुरको सिमानामा पर्ने च्यासलको पधेरामा जमरामा पानी चढाउन नुहाउन आउनेको ताती घटस्थापनादेखी चलेको छ ।
उपत्यकाको हिलोमैलो सुक्दै छ । निलो आकास उघि्रने क्रम बढ्दो छ । बागमती छेऊका सुकुम्बासी बस्तीमा घरका अँागन र मुलढोका माटोले पोतिदैछन् । घर र पसल सजाउन फूल किन्नेहरुको घुइचो कमालादीका फूल पसलमा बाक्लै छ । कालीमाटी तरकाकारी बजारमा खाद्यन्न किन्नेहरुको भिड छ । गृहणी र ग्राहकले बढाएको जाम व्यवस्थापन गर्न ट्राफिकहरु सिटी फुकिरहेकाछन् ।
मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले कुटुम्ब ब्याण्डको मालश्री धुन रिङब्याकमा राखेका छन् । एफएम रेडियो र टेलिभिजनका समाचार आईडी/जीङगल साउन्डमा पनि मालश्री धुन नै सुनिन्छ । दसैंको साइतपारी चाबहिलको गोपीकृष्ण मुभीजले कुसुमे रुमाल प्रर्दशन गरेको छ । अरु हलमा मेरो एउटा साथी छ चलिरहेको छ । हिन्दी सिनेमा 'दिल बोले हडि्प्पा' 'वान्टेड', र 'ह्वाटस् योर राशि' पनि शुक्रबारदेखी प्रर्दशनमा आएका छन् ।
राजधानी दसैंमय बनेको छ । यै मौकामा त्रिपुरेश्वरको वर्डटे्रड सेन्टर, सुनधाराको काठमाडौं मल, बिशालबजार, शेर्पामल, भाटभटेनी सुपरमार्केट आदिले लुगाकपडा र अन्य उपभोग्य सामग्री विक्रिमा ८० प्रतिशतसम्म छुट अफर राखेका छन् । काठमाडौंको गुढपाक उपहार लिनेहरुको भिड न्यूरोड छ । कपडा र अन्य आइटम किन्नेहरुले खिचापोखरी र असन मानव सागर बनेको छ । ती दुई स्थानमा सडकमा बाइक चलाउनु भन्दा सगरमाथा उक्लिन सजिलो छ ।
राजधानी कर्मथलो बनाएका डेरावालाहरुको लर्को जन्मथलोतिर लम्किएको छ । अरनिको राजमार्गदेखी थानकोट नाकामा सवारीको चँाप बढेको छ । झोला भिरेका अल्लारे यात्रुले दोलखा र रामेछापका बसका छत भरिएका छन् । रत्नपार्क, गंगोबुबाट लामो दुरी छुट्ने बसमा यात्रु कोचाकोछ छन् । फूलपातीका दिनदेखी सडकमा सवारी चाप घट्दै छ । ८० वटा व्यवसायीले सवारी चलाउने राजधानीमा साधनको चाप पनि घट्दो छ । राजधानी बाहिरका सहरतिर उडान भर्ने यती एयरले इन्भेष्टमेन्ट बैकको वेभसाइटमार्फत ई-टिकट विक्री सुरु गरेेको छ ।
यतिबेला राजधानीबासीका घरका दैलामा कुकुरको भुकाई सुनिदैन् । कुकुर बाध्ने खोर छेऊ लामकाने खसी घासका ठुटा चपाइरहेका भेटिन्छन् । कलंकी, भृकुटीमण्डप, टुकुचा, धोवीखोला र बबरमहलमा मासुपारखीहरु खसी-बोका मोलमोल्याईमा ब्यस्त छन् । घर-घरका कौशीमा बसेर गृहणीहरु गेडागुडी केलाउन र मसला सुकाउन ब्यस्त देखिन्छन् । पढाइबाट फुर्सदिला बनेका बोर्डिङे केटाकेटीहरु जागिरे र व्यापारी बुवासँग नयँा कपडा, मोबाइल, इलेक्टोनिक्स डिभाइस किनाउन फकाइरहेका भेटिन्छन् । चक्रपथभित्र र बाहिरका अधिकास घरका अँागनमा तिहारकालागि सँाचेर राखेका सयपत्री फूलले बारी ढकमक बनेकाछन् ।
पत्रपत्रिका मोबाइल कम्पनीले दसैंको अवसरमा मोबाइल किन्नेलाई सुनचँादी मात्रै होइन हिरा मोती बषर्ाको लोभ देखाउदै विज्ञापन गरेकाछन् । यस्तोलोभटिभी,माइक्रोओभन,फि्रज,मोटरसाइल,कार किन्नेलाई पनि छ । शुभकामना बाढ्दै मदिरा उद्योग र वित्तीय संस्थाले पत्रपत्रिका पाना भरेकाछन् । सहरभित्र टागिएका होर्डिङबोर्डमा रातो टिका र पहेलपुर जमारायुक्त शुभकामना रंगिन अक्षरमा लेखिएकाछन् । 'घर कहिले जाने हो ?' भन्ने प्रश्न यतिबेलाको सर्वाधिक चर्चित बनेको छ । चिया पसलदेखी कार्यालय होस वा बैकमा चेक साट्नेदेखी तेल स्टेशनमा पेट्रोल भर्न लाम बसेका आफन्त र छरछिमेकले सबैभन्दा पहिल्यै यै प्रश्न र्तेस्याउछन् ।
इमेलको इन बक्स होस वा मोबाइलको मेसेज बक्स सबैतिर आर्कषक डिजाइनमा लेखिएका रसिला शुभकामना सन्देश छन् । कुर्ची र कम्प्युटर हारालुछ हुने हाम्रो समाचार कक्षमा यतिबेला आधाभन्दा बढी थन्किएकाछन् । यो सुनसान दृश्यले हाम्रो समाचार कक्षलाई पनि दसैंमय बनाएको छ । त्यसैले तपाइहरुलाई हाम्रो तर्फबाट पनि दशैको शुभकामना ।
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 3:11 PM
Adams Kevin December 1, 2014 at 4:24 PM